Tropy Jeannette: hotsaroana i Mamy Rajaonarivelo | NewsMada
Tropy Jeannette: hotsaroana i Mamy Rajaonarivelo
Na mbola tsy manana ny trano hoenti-maneho ny kanto aza ny tontolon’ny teatra malagasy, tsy manakana azy ireo hanao hetsika akory izany… Hahatsiaro ny iray amin’ireo faka nitazona ny fototra ny tropy Jeannette…
25 novambra amin’ny 3 ora tolakandro ao amin’ny Alliance française Andavamamba (AFT), hotsaroan’ny Tropy Jeannette i Mamy Rajaonarivelo. Hanana endrika tsiahy an-kira ny seho sehatra amin’io fotoana io. Mpisehatra fototra tao amin’ny Tropy Jeannette ity andrarezin’ny teatra malagasy ity fony fahavelony.
Mizara roa ny fampisehoana. Filalaovana sombin-tseho mandravaka ireo hira teatraly tsy afaka am-bavan’ny mpankafy kalon’ny fahiny nampalaza an’Andrianary Ratianarivo sy Rasamy Gitara, samy mpamoron-kira tao amin’ny tropy Jeannette. Fizarana faharoa, fahatsiarovana an’i Mamy Rajaonarivelo. Fikaloana ireo hira tao amin’ireo tantara nolalaoviny. Hiaka-tsehatra miaraka amin’ny Tropy Jeannette hanatanteraka izany i Kola, zanany lahy, sy i Poussy anabavin-drainy (efa samy ao amin’ny Tropy Jeannette rahateo izy ireo) sy i Lala Rajaonarivelo reniny.
Voataiza teo anivon’ny teatra izy. Nisehatra anjara madinika no niantombohany. Rehefa nodimandry ny rainy, nandimby azy teo amin’ny fitazonana ny anjara toerana fototra (rôle principal) i Mamy ka ny tantara “Zanaboromahery” nosoratan’i Elizà Freda no nanombohany izany. Mpisehatra fototry ny Tropy Jeannette andiany Fahatelo A sy B i Mamy. Nampalaza azy sy ny Tropy Jeannette ny fahaizany misehatra sy ny fananany feo avo, tena ilaina eo amin’ny hira teatraly malagasy. Noho ny tsy fahasalamany, voatery nitsahatra tsy niaka-tsehatra izy ary nodimandry ny 20 aogositra 2017.